အွန်လိုင်းပရဟိတဈေးရောင်းပွဲတော်လုပ်ပြီး ဖားကန့်က နစ်နာသူတွေကို ကူညီပေးသွားမယ့်ဖိုးချစ် – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဖိုးချစ်ကတော့ အသက်ငယ်ပေမယ့် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်အားထက် သန်မှုတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရသူတ စ်ယောက်ပါ။ ကိုဗစ်ကာလစတင်ကတည်းက သဘင်သည်တွေရဲ့အခက်အခဲကို တတ်နိုင်သ မျှဖြေရှင်းပေးနေသလို အခုတစ်ခါမှာလည်း ဖားကန့်မြေပြိုမှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့သူေ တွ ကို ကူညီပေးဦးပါမယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…
ဖားကန့်မှော်တွေထဲမှာတော့ နှစ်စဉ်မြေပြိုမှုကြောင့် လူရာပေါင်းများစွာအသက်ပေးနေရပြီး လွန် ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း ဖားကန့် ၊ ဝှေခါမှော်အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကြောင့် လူနှစ်ရာ ထက်မ နည်းသေဆုံးခဲ့ရတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ သူတို့ကိုကူ ညီဖို့အတွက် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်းကို ” ဖားကန့်မှာ မြေစာ ပုံပြို လို့ ထိခိုက် သွားကြရတဲ့ သွေးရင်းသားရင်းများအတွက် online ပရဟိတ ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပပါ မယ်ဗျာ…
အရင်းများကိုစိုက်ထုတ်ပြီး ရောင်းရသမျှအားလုံးကို လှူဒါန်းပေးသွားပါ့မယ်နော်… ကိုယ်ရှင် သန်နေတာ အများအတွက် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်… အားလုံး အနုပညာညီအကိုမောင်နှမတွေ… ကိုယ်တိုင်ပေးပို့ ရောင်းချသွားကြမယ်…. အသေးစိတ် ကြေညာပေးပါ့မယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ လက် ရာလေးတွေ စားရင်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေဖော်ပြလာပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ… “ကိုယ်ရှင်သန်နေတာ အများအတွက်ဖြစ်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ရည်ရွယ် ချက်ေ လးကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ဖိုးချစ်ကတော့ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုဝမ်းနည်းစေခဲ့တဲ့ ဖားကန့် မြေပြိုမှုက နစ်နာခဲ့သူတွေကို အွန်လိုင်းပရဟိတဈေးရောင်းပြီး ကူညီပေးသွားမှာမို့ အားပေး လိုက် ကြပါဦးနော်။
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောဖိုးခဈြကတော့ အသကျငယျပမေယျ့ ဦးဆောငျနိုငျစှမျးနဲ့စိတျ အား ထကျ သနျမှုတို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသဘငျအစညျးအရုံးရဲ့ ဥက်ကဌအဖွဈ တာဝနျပေး ခွငျး ခံထားရသူတ ဈယောကျပါ။ ကိုဗဈကာလစတငျကတညျးက သဘငျသညျတှရေဲ့အခကျ အခဲ ကို တတျနိုငျသ မြှဖွရှေငျးပေးနသေလို အခုတဈခါမှာလညျး ဖားကနျ့မွပွေိုမှုကွောငျ့ ထိခို ကျနဈနာခဲ့ရတဲ့သူေ တှ ကို ကူညီပေးဦးပါမယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ…
ဖားကနျ့မှျောတှထေဲမှာတော့ နှဈစဉျမွပွေိုမှုကွောငျ့ လူရာပေါငျးမြားစှာအသကျပေးနရေပွီး လှနျ ခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကလညျး ဖားကနျ့ ၊ ဝှခေါမှျောအတှငျးမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့မွပွေိုမှုကွောငျ့ လူနှဈရာ ထကျမ နညျးသဆေုံးခဲ့ရတာကိုတော့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။ ဖိုးခဈြကတော့ သူတို့ကိုကူ ညီဖို့အတှကျ အစီအစဉျလေးတဈခုပွုလုပျထားကွောငျးကို ” ဖားကနျ့မှာ မွစော ပုံပွို လို့ ထိခိုကျ သှားကွရတဲ့ သှေးရငျးသားရငျးမြားအတှကျ online ပရဟိတ ဈေးရောငျးပှဲတျော ကငျြးပပါ မယျဗြာ…
အရငျးမြားကိုစိုကျထုတျပွီး ရောငျးရသမြှအားလုံးကို လှူဒါနျးပေးသှားပါ့မယျနျော… ကိုယျ ရှငျ သနျနတော အမြားအတှကျ ဖွဈစခေငျြပါတယျ… အားလုံး အနုပညာညီအကိုမောငျနှ မတှေ… ကိုယျတိုငျပေးပို့ ရောငျးခသြှားကွမယျ…. အသေးစိတျ ကွညောပေးပါ့မယျဗြာ ကြှ နျတျောတို့ လကျ ရာလေးတှေ စားရငျး ကုသိုလျယူနိုငျကွပါစေ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ မြှဝဖေျောပွလာပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ… “ကိုယျရှငျသနျနတော အမြားအတှကျဖွဈခငျြတယျ” ဆိုတဲ့ရညျရှယျ ခကျြေ လးကို လကျကိုငျထားတဲ့ဖိုးခဈြကတော့ မွနျမာပွညျသူတဈရပျလုံးကိုဝမျးနညျးစခေဲ့တဲ့ ဖားကနျ့ မွပွေိုမှုက နဈနာခဲ့သူတှကေို အှနျလိုငျးပရဟိတဈေးရောငျးပွီး ကူညီပေးသှားမှာမို့ အားပေး လိုကျ ကွပါဦးနျော။
အကဉျြးထောငျကနေ ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာတဲ့ မိခငျဖွဈသူ မသေနျးနုကို နှေးနှေးထှေးထှေးပှေ့ ဖကျရငျးဝမျးသာပီတိဖွဈနတေဲ့ မငျးသနျ့မောငျမောငျ
နားထောငျသူတိုငျး မကျြရညျစို့ရ အောငျ တောငျးပနျနရှောတဲ့ မငျး သမီးကွီး မသေနျးနု ( ဗီဒီယို)